नेदरल्याण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिम वकिल - Law & More
के तपाईंलाई अस्थायी रूपमा तपाईंको कम्पनीमा एक वकिलको आवश्यक छ? निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको कम्पनीसँग पर्याप्त कानूनी समर्थन छ र एक अन्तरिम वकीलबाट कल गर्नुहोस् Law & More तुरुन्त अन्तरिम वकिललाई काममा लिनुको कारण प्रत्येक कम्पनीको लागि फरक हुन्छ। यो हुन सक्छ कि तपाइँको कम्पनी भित्र बिरामी परेको छ, बिरामी कर्मचारी हुनुहुन्छ, तपाई बचेमा काम गर्न चाहानुहुन्छ वा तपाई पक्का हुनुहुन्छ कि प्रोजेक्ट राम्रो चलिरहेको छ।
के तपाइँ टेम्पोररी एक्स्टेन्सनको लागि एक विशेषज्ञलाई हेर्दै हुनुहुन्छ?
के तपाईंलाई अस्थायी रूपमा तपाईंको कम्पनीमा एक वकिलको आवश्यक छ? निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको कम्पनीसँग पर्याप्त कानूनी समर्थन छ र एक अन्तरिम वकीलबाट कल गर्नुहोस् Law & More तुरुन्त अन्तरिम वकिललाई काममा लिनुको कारण प्रत्येक कम्पनीको लागि फरक हुन्छ। यो हुन सक्छ कि तपाइँको कम्पनी भित्र बिरामी परेको छ, बिरामी कर्मचारी हुनुहुन्छ, तपाई बचेमा काम गर्न चाहानुहुन्छ वा तपाई पक्का हुनुहुन्छ कि प्रोजेक्ट राम्रो चलिरहेको छ। सबै प्रकारका विभिन्न समस्याहरू अन्तरिम वकिललाई काममा लिएर हल गर्न सकिन्छ Law & More। यी समस्याहरूले तपाईंको कम्पनीलाई यसको अधिकतममा प्रदर्शन नगर्न सक्छ र यसको नकारात्मक परिणामहरू हुन सक्छ। अन्तरिम वकिललाई काममा लिने मुख्य लक्ष्य भनेको तपाईंको कम्पनीको गुणस्तरको ग्यारेन्टी गर्नु हो। यो सम्भव छ किनकि उसले वा उसले तपाईंको कम्पनीमा नयाँ र नयाँ दृश्य दिन्छ। किनकि वकिलले पनि सजिलै स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्दछ, तपाईं छनौट गर्न लामो पर्खाइमा पर्दैन।
एक अन्तरिम वकिललाई भर्ती गर्दै
हामी मा Law & More विश्वास गर्नुहोस् यो महत्वपूर्ण छ कि प्रतिफल मा एक प्रदर्शन छ जब तपाईं एक अंतरिम वकिल राख्नु हुन्छ। त्यसकारण हामीसँग वर्षौंको अनुभव भएका वकिलहरू छन् जससँग कानुनमा वकिलको विशेष ज्ञान छ, ताकि तपाईं उनीहरूलाई तुरून्त डिप्लोय गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, के तपाईं एक प्रोजेक्ट शुरू गर्न लाग्नुभएको छ, के तपाईं पुनर्गठनको योजना गर्दै हुनुहुन्छ वा तपाईंले अनुपस्थितको अस्थायी बिदा लिइरहनु भएको छ? फेरी एकमा कल गर्नुहोस् Law & Moreअन्तरिम वकिलहरु।
“परिचयमा छलफल गरियो
कार्यको स्पष्ट योजना कुरा गर्नुहोस्।
संलग्न छ र समानुभूति गर्न सक्छ
ग्राहकको समस्या संग "
जब तपाईं एक अन्तरिम कम्पनी वकिल राख्नुहुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण छ कि यो वकिल छोटो सूचनामा तैनात गर्न सकिन्छ। हामी मा Law & More हाम्रो अन्तरिम कर्पोरेट वकिलहरु तपाइँको कम्पनी को लागी छोटो सूचना मा तैनात गर्न सकिन्छ भनेर सुनिश्चित गर्न कोशिस गर्नुहोस्, ताकि तपाईले कुनै व्यवधान बिना काम गर्न जारी राख्न सक्नुहुनेछ। को वकिल Law & More दिन-प्रतिदिन कानूनी कार्यवाहीमा तपाईंलाई मद्दत गर्दछ, तर त्यो कार्य गर्न सक्षम पनि हुन्छ जुन एक पेशेवर वकिलबाट अपेक्षित हुन्छ। यसका साथै, हाम्रा विशेषज्ञहरूले तपाईंको कानुनी विभाग र तपाईंको अन्य आन्तरिक र बाह्य सल्लाहकारहरूसँग मिलेर काम गर्न सक्दछन्, तर उनीहरूले तपाईंको कम्पनी भित्र ठूला परियोजनाहरू पनि लिन सक्छन् र स्वतन्त्र सल्लाह प्रदान गर्न सक्दछन्। के तपाईलाई एक अन्तरिम वकिल चाहिन्छ? त्यसो भए कृपया वकिललाई सम्पर्क गर्नुहोस् Law & More.
किन अन्तरिम वकिललाई भाडामा लिनुहोस् Law & More?
को अन्तरिम वकिल Law & More पहिले नै एक ज्ञान स्तर मा छन्
काममा पछाडि नहुनुहोस् र एक अन्तरिम वकिललाई काममा लिनुहोस्
हाम्रो अन्तरिम वकिलहरु लाई एक वकील को ज्ञान छ
ढिलाइ भएको काममा समातिनुहोस् किनकि हाम्रो अन्तरिम वकिलहरू तुरून्त तैनाथ गर्न सकिन्छ